Ma la Socotaa in Jwxo-shiil, Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ee Cwxo uu u Gumeeyey Eritrea? – Rasaasa News
Tolow dadweynaha Somalida Ogadeeniya ma la socdaan in Ciidanka Jabhada wadaniga xoreynta ogadeeniya uu dalka Eritrea Beeraha u Qodo Dekadana uu ka xamalo bilaash!
Waxaanu idiin soo wadnaa qormooyin dhawra oo aanu ku soo qaadayno xaalado laga murugoodo oo ka gaadhay Cwxo ilaa iyo eegana ku haysta inta wali joogta dalka Eritrea. Qormooyinkan oo naga soo gaadhay xubno ka tirsan ciidanka oo miciin mooday in la sheego xaalado fool xun oo kolkii dambana nacayb reebay, kuwaas oo ku habsaday dhalinyaradii la geeyey Eritrea.
Anaga oo u danaynayna halganka tixgalinayna xog ogaalnimada dhibaatooyinka ay N/hurayaalku kala kulmeen halganka dhexdiis, dhibaatooyinkaas oo leh mid shakhsi iyo mid guudba uuna gaysteen Jwxo-shiil iyo jilibkiis Liibaan Cukur. Waxaanu jeclaanay in aanu shaaca uga qaadno bulshada Somalida Ogadeeniya, sidii uu ku bilowday burburka halganka Somalida Ogadeeniya ee ay horseedka ka ahayd Jabhada ONLF iyo sida ay uga faa,iidaysatay xukuumada Eritrea umada Somalida Ogadeeniya.
Ma la socotaan dadweynaha Somalida Ogadeeniyow in dhalinyardii Somalida Ogadeeniya ee la moodayey in loo tababaryo sidii ay ugu dagaalami lahaayeen dhulkooda in ay ka shaqayn jireen beeraha dalka Eritrea, mase la soctaan in 70 wiil oo reer Ogadeeniya ah lagu toogtay magaalada Casab, mase la socotaan in 50 ka mid ahaa dhalinyaradaas ay iyaga oo waalan joogaan xerada Qaxootiga ee Casab, in ka badan 38 wiil iyo 4 gabdhood in dhabarka laga jabiyey oo qaarkood dhintay qaarna iyaga oo curyaamiin ah ay magaaalada Casab ka dawarsadaan arimahaas oo dhan iyo qaar kale oo xiiso leh waxaan idiinku soo qaadi doonaa qormooyin is dabo joog ah oo aan idiin soo dayn doono …..
Xubno badan oo ka tirsanaa dhalinyaradii tababarka loo geeyey dalka Eritrea ayaanu la sheekaysanay, waxayna noo sheegeen wixii ku dhacay iyaga lafahooda iyo wixii ka dhacay xeradii tababarka ee ka faa,iidaysiga dhalinyarada Somalida Ogadeeniya. Dhalinyarada la geeyey dalka Eritrea ayaa waxay u badnaayeen dhalinyaro ka soo jeeda reer miyi, waxaana laga soo uruuriyey miyiga dhulka Somalida Ogadeeniya iyaga oo logu baaqay in la siin doono tababaro ciidan iyo waxbarasho, si ay awood ugu helaan in ay xabashida dhulkooda ka xoreeyaan.
Xiligaas isaga ah waxaa gudaha galay Jwxo-shiil oo xiligaas loo yaqaanay Maxamed Cumar Cismaan iyo Dr. Dolal, iyaga oo ka kicitimay dalka Ingriiska xoogaa doolar ahna ay safarada Eritrea jeebka ugu shubtay oo kolkaas la moodayey in xukuumada Eritrea ay wado danaha halganka Ogadeeniya, Dubai bay ka degeen, Nairobi marinkoodaa ahaa, Galkacyo gudaha Ogadeeniya ayey u dhaafeen, waxaa ragaas soo dhaweeyey Sulub Cabdi Cabaas oo ahaa raga xaga gesinimada iyo go,aamada ay Jabhadu ku dhaadato iyo Ina Yuusuf Taani iyo Ina Ugaas mahad, xiligaas isaga ah Jwxo-shiil, waxba ma ahayn waxaana loogu celcelin jiray si uu u barto afarta xaraf ee u taagan Jabhada Wadanga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Kolkii warka la kala qaatay ayaa wafti loo kala diray dhamaan gabalada Somalida Ogadeeniya, waxaana dhakhso la hubsaday in dalka laga heli karo ciidan wixii loo baahan yahay. Muddo ka dib waxaa la diyaariyey raacii ugu horeyey oo la geeyey magaalada Casab oo xiligaas Jwxo laga siiyey xero tababar.
Cimilada Eritrea iyo cuntada laga cuno Eritrea aad ayey uga gadisan tahay mida Ogadeniya. Waxaana kolkiiba qaar badan oo ka mid ahaa dhalinyarada soo foodsaartay caafimad xumo iyo xanuuno ay ugu wacnayd gaajo.
Ina Ugaas Mahada oo ahaa nin aad aqoon ugu leh arimaha ciidamada iyo loxos bixintooda ayaa kolkaas ahaa hogaanka gaashaandhiga waxaana uu si deg deg ah isu waafajiyey ciidankii cusbaa iyo cimiladii Eritrea.
Waxaana bilowday tababarkii loo keenay in ay qaataan dhalinyaradu si ay uga qayb qaataan xoreynata dhulkooda. Kolkii uu socday tababrku lix blood ayaa waxaa Casab soo gaadhay raacii labaad, oo ku yimid qorshe ciidan oo ahaa in ayna xeradu madhanin marka ciidanka hore tababarka dhamaysto.
la soco Qayb labaad ……
rasaas baa runta sheege rafiiqaaga ka yeelo